Karoona Ma La iskugu Gudbiyaa Taleefoonka? | Xaqiiqonews
Karoona Ma La iskugu Gudbiyaa Taleefoonka?
Shir sanadeed ay dhawaan iskugu imaadeen “Warshadaha sameeya Taleefoonada” ayaa waxaa dadka lala wadaagay cabsi kale taasi oo ku saabsan qaabka uu u faafo Karoona Fayrus.
Baarayaasha ayaa dadka u sheegay in Karoona Fayrus uu ku gudbo qunfaca, iyagoo xusay in qofka xanuunka qaba uu u ku qunfici karo shaashadda Taleefoonka, taasi oo marka dambe isku badali kara “cudur side”.
“Hadii taleefoon cudurka sida uu isticmaalo qof fiyow..sidaasi ayuu cudurka ku qaadi karaa” ayuu yiri Dr. Richard Dawood.
Dr. Richard ayaa dadka kula taliyey in ay isticmaalaan dawooyinka iyo biyaha lagu nadiifiyo shaaashadda si la iskaga ilaaliyo fiditaanka jeermiska.
Sanadkii hore Sheikha Petalia oo ah haweeneyda maamusha Xarunta caafimaadka ee Pall Mall Medical ayaa sheegtay in shaashadaha taleefonka ay ka mid yihiin cudur-sidiyaasha “Fayruska Hergab Shimbiraha”.